Sida loo beddelo dariiqa soo dejinta ee SnapTube app? - LifeBytes | LifeBytes
Sidee loo beddelaa dariiqa soo dejinta ee barnaamijka SnapTube?
Soo -dejiyaha Fiidiyowga ee SnapTube waa soo -dejiyaha fiidiyowga ugu fiican ee aaladahaaga android ee hadda la isticmaalo. Waxay u oggolaaneysaa soo -dejinta degellada kala duwan sida YouTube, MetaCafe, DailyMotion oo ay weheliyaan Facebook iyo Instagram. In kasta oo ay tahay codsi loogu talagalay android, lagama heli karo Google Play Store. Sababta ayaa ah in Google uu xaddido dhammaan soo dejimaha fiidiyaha YouTube -ka. Laakiin waxaa jira habab kale oo la heli karo.
1 Astaamaha App -ka Soo -dejiyaha ee SnapTube:
2 Sideen u beddeli karaa meesha laga soo dejisto ee barnaamijka SnapTube?
3 Habka loo baddalayo dariiqa soo dejinta:
4 Sidee ayuu SnapTube u shaqeeyaa?
Astaamaha App -ka Soo -dejiyaha ee SnapTube:
soo degso Snaptube APK, interface -ka cajiibka ah ee adeegsadaha ayaa kuu oggolaanaya inaad si habsami leh u maamusho soo -dejiyaha.
SnapTube waxay la timaadaa xulashooyin dejin oo kala duwan si loo dedejiyo soo dejinta fiidiyaha.
SnapTube waxay bixisaa mashiinka raadinta oo awood leh oo ay weheliso astaamaha sawir -gacmeedyada caadada ah.
Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa fiidiyowyo soo dejin leh tayo 60FPS iyo qaraar ah 4K.
Si laguugu soo dejiyo deg deg deg ah, dalabka wuxuu adeegsadaa isku xirnaan badan.
Waxaad ka heli doontaa mareegaha oo dhan hal meel.
Ma jiro xayeysiis ama soo-bood.
Waxaad ka soo dejisan kartaa fiidiyowyada qarsoon ee YouTube -ka.
Si sahal ah, waxaa suurtagal ah in faylka fiidiyaha loo rogo mid maqal ah.
Shaqada calaamadaynta ayaa sidoo kale la heli karaa. Waxa kale oo aad isku habayn kartaa soo dejinno badan waqti isku mid ah.
Sideen u beddeli karaa meesha laga soo dejisto ee barnaamijka SnapTube?
Dhammaan fiidiyowyada YouTube -ka si toos ah ayaa si toos ah loogu kaydiyaa kaydinta gudaha. Si aad u hesho, waxaad raaci kartaa iskuxirka Kaydinta Gudaha> SnapTube> Fiidiyow. Haddii aysan jirin boos ku filan ka dib soo degsashada fiidiyowyo aad u badan, waxaa laga yaabaa inay carqaladeyso shaqooyinka habboon ee codsiyada kale. Qalabkaagu wuxuu bilaabi doonaa inuu si tartiib tartiib ah u shaqeeyo waqti ka dib. Si looga fogaado xaaladdan, waxaad beddeli kartaa dariiqa soo -dejinta fiidyowyada.
Habka loo baddalayo dariiqa soo dejinta:
Fur dajiyaha fiidiyaha ee SnapTube.
Waxaa ku yaal sumadda marsho geeska kore ee midig ee shaashadda. Guji si aad u furto goobaha.
Hadda, dooro ikhtiyaarka «Wadada soo dejinta».
Ka dooro MicroSD si aad ugu keydiso fiidiyowga aaladda dibedda wixii hadda ka dambeeya.
Waxaad kaloo abuuri kartaa gal gaar ah. Dhinaca kore ee midigta, waxaa ku yaal astaanta faylka, guji.
Sidoo kale, u bixi magac sida SnapTube oo fur adiga oo hal mar garaacaya.
Waa inaad xaqiijisaa adiga oo gujinaya "Dooro galkan". Waxaad kaloo abuuri kartaa fayl -hoosaad adoo gujinaya ikhtiyaarka "Abuur gal cusub".
Codsiga ayaa mar kale ku weydiin doona xaqiijin, riix «Dooro» si aad u xaqiijiso.
Hadda goobta soo dejinta ayaa si guul leh loogu beddelay kaydinta dibedda. Ugu dambayntii, waxaad soo dejisan kartaa fiidiyaha adiga oo aan ka werwerin meesha kaydinta.
Waxaad ka daawan kartaa fiidiyaha Gallery ama waxaad gacanta ku raaci kartaa Maareeyaha faylka> Kaarka SD> SnapTube. Waa intaas.
Sidee ayuu SnapTube u shaqeeyaa?
Sida magaca arjiga uu noo sheegayo in si deg deg ah loo soo dejisto. Waxay inta badan ku shaqaysaa makiinado goobitaan oo kala duwan.
Raadinta Qeybta: Raadinta Qeybta waxay kaa caawineysaa inaad sahamiso waxyaabaha aad rabto maadaama aad ku xiriirin karto toban qaybood oo kala duwan. Tusaale ahaan, fiidiyowyo qosol leh, heeso, sawirro, iwm. Si aad uga beddesho hal qayb oo aad ugu gudubto mid kale, kaliya shaashadda ka wareeji bidix ilaa midig.
Raadinta Ereyga: Iyada oo loo marayo raadinta ereyga muhiimka ah, waxaad sidoo kale ku heli kartaa fiidiyowyada aad rabto. Ka dib markaad hesho waxaad rabto, waad soo dejisan kartaa oo kaydin kartaa daawashada dambe.
Hit Trending: Waxa kale oo aad ka heli kartaa isbeddelada oo ku garaaca fiidiyowyo jaantusyo muusig iyo qaar kaloo badan oo tan ku jira.
Waxaan sidoo kale xusi karnaa in SnapTube APP ay aad u fududahay in la isticmaalo iyo degsade deg deg ah. Si aad u hesho saamaynta HD, waxaad u adeegsan kartaa nooca ugu sarreeya $ 1.99 oo keliya. Labadaba tartamayaasha TubeMate, Vidmate ama Videoder (
soo dejiyaha fiidiyaha halkan) waxay leeyihiin shaqooyin isku mid ah, laakiin isbeddelku wuxuu ku jiraa qaab -dhismeedkiisa soo -dejinta ee awoodda leh oo leh xulashooyin kala duwan. Waa inaan sheegnaa in laga yaabo inaadan barnaamijkan ka helin Dukaanka Google Play sababo la xiriira siyaasadaha xuquuqda lahaanshaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Sidee loo beddelaa dariiqa soo dejinta ee barnaamijka SnapTube?
Isticmaal qiimaha eber ee Credomatic Costa Rica
Hel Kaarka Bac ee Costa Rica Credomatic